AppSheet: Wulite Ma Na-etinye A App Nkwado Mobile App Na Google Ibé akwụkwọ | Martech Zone
AppSheet: Wulite ma tinye Ngwa App Mobile App na Google Sheets
Ọ bụ ezie na m ka na-etolite site n’oge ruo n’oge, enweghị m ikike ma ọ bụ oge ịghọ onye mmepe oge niile. Enwere m ekele maka ihe ọmụma m nwere - ọ na - enyere m aka imeri ọdịiche dị n'etiti ihe mmepe na azụmaahịa ndị nwere nsogbu kwa ụbọchị. Mana… Adighi m acho iru akwukwo.
Enwere ihe ole na ole mere ịga n'ihu na mmemme mmemme m abụghị nnukwu atụmatụ:
N'oge a na ọrụ m - achọrọ ọkachamara m ebe ọzọ.
Otú ọ dị, nnukwu ihe kpatara ya bụ n'ihi na ekwenyeghị m na ọchịchọ ndị a na-enweghị atụ maka ndị mmepe ga-adịgide.
N'ihi gịnị? N'ihi na isi nyiwe na-ebugharị usoro enweghị koodu ga - eweta ezigbo mma.
Enweghị Usoro, Codeless, na Ngwọta Koodu Ala
Akụkụ ọzọ nke teknụzụ dijitalụ nwere ike bụrụ ihe na-atọ ụtọ karịa ọganihu ọ bụla anyị hụtụrụla n'ime obere oge. Nnukwu ụlọ ọrụ na-emepe usoro ịdọrọ na dobe (enweghị koodu ma ọ bụ enweghị koodu) nke dị mma. Ohere maka sistemụ a enweghị njedebe n'ihi na ndị isi azụmaahịa agaghị achọ ụlọ ọrụ mmepe iji weta ihe ngwọta ha site na ihe osise na akwa nhicha site na ngwa zuru ezu.
Ọ bụrụ na ị na-eji Oghere Google maka nzukọ gị (Aga m akwado ya), ha amalitela AppSheet - onye na-ewu ngwa koodu na-enweghị koodu! Na Ngwa akwụkwọ, ị nwere ike ịmepụta ngwa ọdịnala ngwa ngwa iji nyere aka mee ka ọrụ dị mfe, rụọ ọrụ na ime ka ọrụ dị mfe. Enweghị koodu nzuzo dị mkpa.
Onye ọ bụla nọ na Google Workspace gị nwere ike ịmepụta ma jikwaa ngwa nke aka ha… nke nwere ike ịbawanye arụ ọrụ otu gị, belata njehie, ma belata backlog nke ndị otu mmepe gị.
AppSheet Afọ Nkwado Ngwa
Nke a bụ nnukwu ihe atụ, a njikwa nnabata njikwa nke na-etinye Google Sheets na AppSheet iji mee ka ọdịnaya dị mfe site na usoro nnabata usoro.
Ngwa a dị na Google Sheets, mana ị nwere ike iwekọta isi data ọ bụla ịchọrọ.
Dabere na iTunes ma ọ bụ Google Play
Nke kachasị mma? Ngwa ị jiri oge ịmepụta na-enweghị akara nke koodu abụghị naanị a ngwa weebụ nke na-agba na ihe nchọgharị, AppSheet na-enye ndị ọrụ ohere ịmepụta ụdị whitelabel nke ngwa ị nwere ike idokwa na Google Play ma ọ bụ iPhone site na iTunes.
Ntinye ego chọrọ ikikere AppSheet nke kachasị nke dabere na ịkwụ ụgwọ-onye ọrụ ma ọ bụ njikọ PRO.
Snye ọnụahịa AppSheet
Ngosipụta: Ana m eji nke m Google Mgbakwunye koodu ebe a.
Tags: apụl iosmpempe akwụkwọenweghị kooduọdịnaya nkwenye ọdịnayangwa googlegoogle ngwaazụmahịa googlegoogle playebe ọrụ googlegsuiteiosios ngwaitunesmobile ngwaenweghị kooduọ dịghị-koodu ngwa na-ewu
Mmekọrịta dị n’etiti ndị mmadụ, njem ndị ahịa, na ọfụma ahịa